''အကယ်ဒမီ ရသွားတဲ့သူကလည်း ကိုယ့်ထက်တော်တယ်လို့ ပြောလို့မရပါဘူး။ အကယ်ဒမီဘုတ်အဖွဲ့ ချမှတ်ထာ?? - Yangon Media Group
”အကယ်ဒမီ ရသွားတဲ့သူကလည်း ကိုယ့်ထက်တော်တယ်လို့ ပြောလို့မရပါဘူး။ အကယ်ဒမီဘုတ်အဖွဲ့ ချမှတ်ထာ??
၂ဝ၁၈ ခုနှစ်အတွက် မြန်မာ့ရုပ်ရှင်ထူးချွန်ဆုပေးပွဲတွင် တစ်သက် တာထူးချွန်ဆုရရှိခဲ့သည့် ဝါရင့်သရုပ် ဆောင် ဒေါ်မြင့်မြင့်ခင်နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်း ခြင်း..။
မေး- အခုလို တစ်သက်တာထူးချွန်ဆုရ ရှိခဲ့တဲ့အပေါ် ခံစားချက် လေးသိချင်ပါတယ်။
ဖြေ- အခုလို အနုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီး တစ်သက်တာဆုရရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့် အတိုင်းမသိကို ဝမ်းသာရပါတယ်။ အကယ်ဒမီဆုဆိုတာက ကိုယ်ကြိုးစားရင်ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်သက်တာဆုကကျတော့ ကိုယ့်တစ်သက်မှာတစ်ခါပဲရတာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခါ ရဖို့လည်း မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ အဲဒီအချက်တွေကတော့ အရမ်းကိုကွာခြားပါတယ်။
မေး- နှစ်ပေါင်းအကြာကြီး အနုပညာလောကအတွင်းမှာ ဖြတ်သန်းလာပြီး ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အမှတ်တရတွေကိုလည်း ပြောပြပေးပါ။
ဖြေ- အမှတ်တရတွေက အရမ်းကိုများပါတယ်။ ရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်မှာ သွား ရောက်ဖျော်ဖြေရတာမျိုးတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ အခု အမေ့ရဲ့ရုပ်ရှင်သက်တမ်းက နှစ်ပေါင်း ၇ဝ ရှိပါပြီ။ ၁၅ နှစ်သမီးကတည်းက အနုပညာအလုပ် တွေကို စတင်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ နှစ်ပေါင်း ၇ဝ အတောအတွင်းမှာ အနုပညာ အလုပ်တွေကို ခဏနားလိုက်တယ်ဆိုတာလည်း မရှိပါဘူး။ တောက်လျှောက် လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ သားသမီးငါးယောက်မွေးတယ်။ ပရိသတ်တွေကတောင် အံ့သြပါတယ်။ ဘယ်အချိန်မှာ ကလေးတွေ မွေးသွားသလဲဆိုပြီးတော့ မေးကြပါတယ်။ အမှန်တော့ သတိမထားကြည့်ကြလို့ပါ။ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား တွေမှာ အမေကုတ်အင်္ကျီအကြီးကြီးတွေ လက်ကိုင်အိတ်အကြီးကြီးတွေ ကိုင်ပြီဆိုရင် ကိုယ်ဝန်ရှိနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလောက်အထိ ရုပ်ရှင် လောကကို ချစ်ပါတယ်။
မေး- ဒီနှစ်အကယ်ဒမီမှာ ဝေဖန်မှုတွေများခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း အမြင်လေးပြောပြပေးပါဦး။
ဖြေ- ဒါကတော့ ရှင်းရှင်းပြောရရင် ပရိသတ်ကြိုက်တဲ့သူတွေရှိတယ်။ အဲဒီလိုပရိသတ်ကြိုက်တဲ့သူနဲ့ အကယ်ဒမီပေးတဲ့သူနဲ့ ထပ်တူကျသွားရင် ပရိသတ်ကကျေနပ်တယ်။ ထပ်တူမကျရင်တော့ မကျေနပ်တာလေးတွေ တော့ ရှိပါတယ်။ ပရိသတ်တွေကို ပြောချင်တာကတော့ သည်းခံပြီးတော့ ခွင့်လွှတ်ပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။ အကယ်ဒမီကနတ်ကြီးပါတယ်။ အမေဆိုရင်လည်း အကယ်ဒမီငါးခုသာရတယ်။ လွဲခဲ့တာတွေလည်းအများ ကြီးရှိပါတယ်။ မျှော်မှန်းခဲ့ပြီး မရတာတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ ရသွားတဲ့သူကလည်း ကိုယ့်ထက်တော်တယ်လို့ပြောလို့မရပါဘူး။ သူတို့ အကယ်ဒမီဘုတ်အဖွဲ့ချမှတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းတွေနဲ့ကိုက်ညီလို့ရသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်မရပေမယ့် သဘောထားကြီးစွာနဲ့ ခွင့်လွှတ်ပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။ အမေလည်း တချို့ဟာလေးတွေ စိတ်မကောင်းဖြစ်ပါတယ်။ အမေ လက်မကျိုးခင် ကြည့်ခဲ့တာနဲ့ ထွက်လာတဲ့အဖြေတွေနဲ့က မတူတော့ တော် တော်လေး စိတ်မကောင်းဖြစ်ပါတယ်။
မေး- အကယ်ဒမီဆုတွေကို အရင်နိုင်ငံတော်အစိုးရက ပေးခဲ့တုန်းကနဲ့ အခုရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးက ပေးတဲ့အချိန်မှာ ဘယ်လိုကွာခြားမှုတွေရှိလဲ။
ဖြေ- အရင်အမေတို့ ခေတ်တုန်းကတော့ နိုင်ငံတော်အစိုးရကချီးမြှင့်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အမေရခဲ့တဲ့ဆုတွေ အကုန်လုံးကလည်း နိုင်ငံတော်ကပေးတဲ့ အချိန်တုန်းက ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတစ်သက်တာဆုမှ ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးက ပေးတာကိုရတာပါ။ ဟိုအရင်ကနိုင်ငံတော်က တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့သူတွေက အကယ်ဒမီအကဲဖြတ်အဖွဲ့တွေအဖြစ် လုပ်ကိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရုပ်ရှင်နယ်ပယ်က လောကသားတွေ မပါပါဘူး။ အဲဒီတုန်းကလည်း ဒီဘက်ကလောကသားတွေ သူတို့တွေက ဘာနားလည်လို့လဲ ဒီ လောကအကြောင်းကို မသိဘဲပေးတာ မကျေနပ်ဘူးလို့ပြောတာတွေလည်း ရှိလာတော့ ဒီရုပ်ရှင်အဖွဲ့အစည်းက ကိုယ့်ဟာ ကိုယ်လုပ်ရင်ပိုကောင်း မယ်ဆိုပြီးတော့ လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။
'ကိုယ်ကလည်း ကိုယ်ပိုင်သီချင်းလေးတွေ မထွက်လာသေးတော့ Idol ရဲ့ အရိပ်အောက်မှာပဲ ရှိပါသေးတယ်' ငွေဇ?
မော့ကြည့်ရမှာလား ငုံ့ကြည့်ရမှာလား ရန်ကုန်
တောင်းရမ်းနေသည့်ကလေးများနှင့် သက်ကြီးရွယ်အိုများကိုတွေ့ရှိပါက ရန်ကုန်စည်ပင်သို့ သတင်းပေ
ချန်ပီယံလိဂ် ဘာစီလိုနာနှင့် မန်ယူပွဲတွင် ဂိုးသွင်းယူခဲ့သည့် ကော်တင်ညို၏ အောင်ပွဲခံမှုကို
သမ္မတထရန့်၏ ရွေးကောက်ပွဲ မန်နေဂျာတစ်ဦးဖြစ်သူ ဂျော့ပါပါဒိုပိုလော့စ်ကို ထောင်ဒဏ် ၁၄ ရက်ချမှ
ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ဥပဒေ ၂ဝ၁၈ ကို ဝန်ကြီးချုပ် လက်မှတ်ရေးထိုး အတည်ပြုပြဋ္ဌာန်း